शिक्षा Archives - Page 104 of 112 - Sabal Post
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले कोटा निर्धारणमा धाँधली गरेका भन्दै विद्यार्थी आन्दोलित
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगतको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले कोटा निर्धारणमा आर्थिक चलखेल गरेको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन् । महाराजगञ्जस्थित चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको डीन कार्यालय अगाडि विद्यार्थीहरुले कोटा निर्धारण निष्पक्ष ढंगले गर्न माग गर्दै प्रर्दशन गरे । आर्थिक
२६ कार्तिक २०७५, सोमबार विस्तृतमा »
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन आग्रह !
काठमाडौँ, २५ कात्तिक/ व्यवसायका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाइने भएको छ । राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गदैँ शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितोमा राखी ऋण लिएर व्यवसाय गर्न योग्य नागरिकलाई ऋण लिन आग्रह गरेको हो । आव २०७५÷७६
२५ कार्तिक २०७५, आईतवार विस्तृतमा »
२५ कात्तिक, महोत्तरी । विज्ञान प्रविधि तथा तथा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अहिले शिक्षामा आधुनिक विकासको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । आफू त्यसैको निम्ति मन्त्री भएको उनको भनाइ छ । महोत्तरीको गौशालास्थित रुपान्तर मिडिया आयोजना गरेको छठ तथा समाचकेवा पर्वको अवसरमा
शिक्षक सेवा आयोगको आधिकारिक वेबसाइट ह्याक
शिक्षक सेवा आयोगको आधिकारिक वेबसाइट ह्याक भएको छ । आयोगको वेबसाइट टीएसी डट जिओभी टड एनपी खोल्दा ह्याक भएको सूचना देखिन्छ । ‘एक्स एम थ्री एन’ले ह्याक गरेको सूचनामा उल्लेख छ । नेपालको सरकारी वेबसाइट ह्याक भएको यो पहिलो घटना
जापान जान चाहनेले अनलाइनबाट भाषा परीक्षा दिन पाउने !
कात्तिक २१ बुटवल । जापानमा जान चाहने नेपालीले पहिलो पटक अनलाइनबाटै जापानी भाषा परीक्षा दिन पाउने भएका छन् । यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जापानको प्राक्टिकल जापानीज कम्युनिकेसन (पिजेसी) ब्रिजसँग सहकार्य गरी अनलाइनबाटै भाषा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको
अल्छी हुनु बुद्धिमानीको संकेत !
कात्तिक २१ बुटवल । अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताहरूले बडो अचम्मको कुरो पत्ता लगाएको दाबी गरेका छन् । त्यो के भने, अल्छी व्यक्ति सक्रिय रहनेहरूको दाँजोमा बढी बुद्घिमान् हुन सक्छन् रे । सर्तचाहिँ के छ भने, त्यस्ता अल्छी व्यक्तिहरू बढी समय चिन्तन गर्नेचाहिँ
पैसा कमाउने र पीआर पाउने सोच बनाएर अस्ट्रेलिया नआउनुस् !
कात्तिक २१ बुटवल । उच्च शिक्षाका लागि अस्ट्रेलिया आउने विद्यार्थीले प्रारम्भिक सल्लाह र सुझाव नै गलत पाउँछन् । विद्यार्थीहरूलाई किन र के उद्देश्यले यहाँ आउने, थाहै हुँदैन । अभिभावकहरूले पनि आवश्यकताभन्दा धेरै अपेक्षा राख्ने गरेको पाइन्छ । नेपालका कन्सल्ट्यान्सीहरूले जुन
तिलोत्तमा नगर पालिकामा शिक्षकहरुको धर्ना
राजन पन्थी, १६कार्तिक नेपाल शिक्षक महासंघ तिलोत्तमाले आफ्ना २६ सुत्रिय माग राख्दै आज नगरपालिका कार्यालयमा धर्ना दिएको छ। कार्यालय समयमा मध्यान्ह सवा बाह्र बजे देखी तिन घण्टा लामो धर्ना चलेपनि सेवाग्राहिका काम भने निर्बाध रुपमा चलिरहेको थियो।कार्यक्रममा शिक्षक महासंघ का प्रदेश
१६ कार्तिक २०७५, शुक्रबार विस्तृतमा »
दीप बोर्डिङका विद्यार्थीहरूद्धारा बलात्कार र किशोरी माथि हुने यौन हिंसाका विरुद्ध सडक नाटक तथा हस्ताक्षर संकलन
दीप बोर्डिङ हाई स्कूल बुटवल–८, सुख्खानगरको कक्षा १० का विद्यार्थीहरूले बलात्कार र किशोरी माथि हुने यौन हिंसाका विरुद्ध सडक नाटक तथा हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् ।समाजमा बढिरहेको महिला हिंसा र यसले निम्त्याएको समस्यालाई समाधान गर्न महिला हिंसाविरुद्ध सडक नाटक तथा
१५ कार्तिक २०७५, बिहीबार विस्तृतमा »
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त बुटवलको अक्सफोर्ड कलेजले समय सन्दर्भ र विद्यार्थीहरूको माग अनुसार थप दुई वटा नयाँ विषय सञ्चालनमा ल्याएको छ । कलेजले नयाँ विषय अन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेन्ट र ब्याचलर अफ इन्फरमेशन म्यानेजमेन्ट विषय भित्राएर फारम वितरण
११ कार्तिक २०७५, आईतवार विस्तृतमा »